FACIAL ANTI-AGING Factory - Sina FACIAL ANTI-AGING mpanamboatra, mpamatsy
Anti-antitra HIFU endrika fanamafisana ny hoditra amin'ny hoditra FL18
Ity milina ity dia mampiasa famotopotorana angovo avo lenta hitarika onja radio amin'ny alàlan'ny angovo avo lenta sy fanoherana ny fahanterana mankany amin'ny halalin'ny hoditra.
9D hifu thermagic rf hoditra manamafy ny fanesorana ketrona Body Slimming F117
Hifu manampy Theramagic vaovao mitambatra, miteraka fitsaboana haingana amin'ny fanondrotana ny tarehy. Tsy hita maso izy io ary tsy mahomby ao anatiny, haingana sy mahazo aina izy io, miorina amin'ny toerana misy azy ary mieritreritra tsara, manasitrana ketrona sy hoditra malemy amin'ny tarehy, manodidina ny maso sy ny vatana.
Pore ​​multifunctional Minimize Wrinkle Electro-optical EOS 2
Ny epidermis dia mihamangatsiaka amin'ny tendrony aplicator chlled, izay mampitombo ny fiakaran'ny hoditra, miaro bebe kokoa ny épermermis ary manery ny angovo RF hiditra lalindalina kokoa ao amin'ny pre-heat.
Anti-antitra fanesorana ny mony amin'ny efijery Thermagic RF Ho an'ny Salon Thermagic V
Ny iteration farany indrindra momba ny temotra, ary toy ny teo alohany, dia mampiasa angovo radio-hafanana koa izy mba hanafanana ny hoditra avy any ivelany.
Anti-antitra RF Sculpture amin'ny radara tarehy ho an'ny fanesorana ny kentrona LB02
Amin'ny alàlan'ny maody mampitony tena manokana dia afaka mahatratra ny halalin'ilay tanjona amin'ny fomba fitsaboana otra. ka tsy mahatsiaro mangirifiry ny marary.
Fampihenan-tena amin'ny cellulite mampihena ny vatana ary mampihena ny lanjan'ny RF BL02
Ny famafana ny fifandraisana amin'ny tampon-tànana dia mifehy ny hafanan'ny hoditra ary miaro ny firafitry ny dermal tsara, mahatsapa ny voka-dratsin'ny famerenan'ny vatana haingana kokoa rehefa mihamafy ny hoditra!
Dermabrasion rano fantsom-batana oksizenina amin'ny tavoahangy H600
Metabolisma amin'ny vatana: herinaratra bio-photon, birao microcurrent majika RF Bio-photon: manamafy ny asan'ny sela ary mandrisika ny fitomboan'ny proteinina collagen.
Anti Aging Home tsara indrindra amin'ny hoditra RF manamafy ny tarehy mampiakatra tarehy tarehy fikolokoloana hoditra R8A
Ny radio matetika dia tsy mitovy amin'ny laser. Ny fahita matetika amin'ny radio (RF) matetika dia manondro osilasiôna amin'ny faribolana elektrika.
4D Circle Rv Micro Heat fikirakirana RF Beauty Equipment RT08
Capacitive Electric Transfer (CET) dia fomba iray ahafahana mamindra ny herinaratra RF "amin'ny alàlan'ny fahaiza-manao" (fitsipiky ny capacitor elektrika) mankany amin'ny vatan'ny marary amin'ny alàlan'ny elektroda fampiharana ivelany mihetsika.
8 in1 Mitifitra oksizenina hydro Fanadiovana tarehy CV06
8 amin'ny 1 fanadiovana lalina ny oxygen oxygen spray BIO lift scrubber aqua peeling hydro dermabrasion machine tena mahomby amin'ny fanatsarana ny endrik'ilay hoditra, mampihena ny tsipika sy kentrona tsara ary manome rano manondraka ny hoditra.